I-Merrell Iisetyhini zaBafazi
Umhenketho oyinyaniso ngexesha lohambo ufuna ukufunda okuninzi kunokwenzeka kwaye olumnandi, ukufumana amava angalibalekiyo, ukubonakala okucacileyo, owaziwayo abanomdla kunye nokunye okuninzi. Ukuphumla okucwangciswe ngokucophelela akukwazi ukuphazamisa nantoni Nangona kunjalo, ukuba oku kuphumla kusebenzayo, ngoko kule ngxaki, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kwizicathulo. Eli liqela elizimeleyo ngokupheleleyo kwihlabathi lezihlangu, eziza kuhambelana nantoni nawuphi na umhambi. Namhlanje siza kuthetha ngezicathulo zezemidlalo, ezimelelwe yinkampani iMerrell.
Imbali yale nqaku yaqala ngo-1981. Emva koko uRandy Murrell, kunye nabahlobo bakhe uJohn Schweitzer noClark Mathis edolophini yaseVernal, e-Utah, bamise inkampani ebizwa ngokuthi iMerrell. Ngaphantsi kohlobo lwe-otshivalsya lweebhenti zokutyelela. Imveliso yesibini yithatha malunga neenyanga ezintandathu, kwaye ixabiso lalingama-dollar ayi-500.
Ngomnyaka olandelayo, iBhanki yaseVermont inotyalomali kwi-brand entsha ekhulayo ngokukhawuleza. Ngombulelo, uMerrell wanda. Kwieshelulo zeentengiso, izicathulo ezivela kulo mvelisi zavela ngo-1983. Kunyaka ngamnye inkampani yaqhubeka ikhula ngokukhawuleza, yakha imizekelo emitsha kunye neentlobo zeengubo. Namhlanje kwi-arsenal yekhontrakthi kukho imigca emibini ephambili:
Izicathulo zemisebenzi yangaphandle, ukhenketho kunye nokuhamba ukusuka eMerrell
Ngokufanelekileyo kulungele iiholide zasehlobo kunye nokuhamba ngeembadada zezemidlalo ezivela eMerrell. Zidume kakhulu kwihlabathi kwaye zenzelwe ukuzonwabisa okukhuselekileyo, kunye nezokhenketho. Umboleki ngamnye uya kukwazi ukukhetha umzekelo ukuthanda kwakhe, kuba umenzi unikezela uluhlu oluninzi kunye nokuqokelela kwezicathulo ezinokwenza izicwangciso ezizodwa kunye neempawu ezibalaseleyo. Iimbadada zamabhinqa uMerrell nazo zanqobile abalandeli babo, kuba banesakhiwo sokuthakazelisa, ukulungelelanisa kakhulu kunye nomgangatho ophezulu.
Amabhinqa aphantsi phantsi kweenwele zendalo
Indlela yokomeleza ibhanti yeesitokisi?
I-Stylish idibanise izinto zebhinqa
Ungakhetha njani ibhatyi lesikhumba?
I-corset emncinci yeeinline
Iifutshane zamabhantshi - iimodeli ezinokhenketho kunye neendlela eziphathekayo zabasetyhini
Iimpahla ezimfutshane ezihlwaya
Ukucoca isibindi ekhaya
Ividiyo ye-Adel ayinayo ixesha elaneleyo lokuba yinto ethandwa kakhulu kwi-YouTube
Kwiindawo zokuhlala eGrisi
Lazy Lasagna - zokupheka ezilula zokutya kwiimveliso eziqhelekileyo yonke imihla!
ImiNquma - umxholo wekhalori
Indlela yokugcoba ngaphantsi kweengubo?
I-Marinade ye-herring homing
Iiplanga zeplanga zangaphambili
Iifilimi ezikhuthaza impumelelo ebomini
URihanna wanikezelwa kwiYunivesithi yaseHarvard "UbuFulane bonyaka"
Ngaba ndiyakhulelwa i-cyst ovarian?
I-Sea kale - iipropati ezincedo
Ukupheka ikhekhe lezambatata ekhaya?
I-Kitten endlwini - iintsuku zokuqala
Izimpande zeCelery - izakhiwo eziwuncedo
Ukuxiliswa komzimba - unyango